ကြားဖူးနေတဲ့ lcFos က ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လို အကျိုးပြုသလဲ........ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 16/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစာခြေစနစ်ထဲမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော ဘက်တီးရီးယားလေးတွေ မှီတင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ အကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားရော အကျိုးမပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားရောပါ။
အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားလေးတွေကတော့ အစာခြေစနစ်ကစလို့ ကိုယ်ခံအားပါ ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးတာပေါ့။
အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားလေးတွေ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် သူတို့ကို အာဟာရ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အာဟာရကိုတော့ ပရီဘိုင်အိုးတစ်(prebiotics)လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေမှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေက လုံလောက်မှုရှိပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကလေးတွေရဲ့ အစာခြေစနစ်ထဲမှာတော့ ဒီ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားတွေက လုံလုံလောက် မရှိသေးဘူးပေါ့။ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ သားသားမီးမီးတွေ အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုရင် အရေးအကြီးဆုံးက အစာခြေစနစ်ပါ။
အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် သေချာတာက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေ အကောင်းဆုံး ရှင်သန်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကလေးတွေရဲ့ အစာခြေစနစ်ထဲက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေ ရှင်သန်စေဖို့ လိုအပ်မယ့် အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား အာဟာရအကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာပါ။
မေမေတိုင်း ကြားဖူးနေနိုင်တဲ့ lcFos
ဒီစာလုံးလေးက ဘာဆိုတာကို မသိပေမယ့် ကလေးဖြည့်စွက် အာဟာရကြော်ငြာတွေ၊ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ကလေးအာဟာရဆိုင်ရာ ညွှန်ကြား ပညာပေးချက်တွေကနေတဆင့် ကြားဖူးနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီကြားဖူးနေကျ စကားလုံးဖြစ်တဲ့ lcFos ဆိုတာက ဘာများလဲ ……..
ကလေးဖြည့်စွက် အာဟာရ တော်တော်များများမှာ ပါဝင်နေတဲ့ lcFos ဆိုတာက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား အာဟာတစ်မျိုးပါ။ LcFos ကို အရှည်ကောက်ကတော့ Long chain fructo-oligosaccharide လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ် ကျန်းမာရေးကို အားဖြည့်ပေးမယ့် ဇာတ်လိုက်လေးတစ်ခုပေါ့။
သူက ကလေးတစ်ယောက်ကို ဝမ်းဗိုက်ပြဿနာကင်းပြီး အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေကို ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရ ရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ lcFos လို့ သိကြတဲ့ (prebiotics) အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားအာဟာရ တစ်မျိုးကို ပြည့်ဝ လုံလောက်စွာ ကျွေးမွေးပေးမယ်ဆိုရင် ကလေးက
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးမယ်
အူတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကောင်းစေမယ်
အစာခြေစနစ် ရောဂါပိုး ဝင်ရောက် ကူးစက်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးမယ်
ကိုယ်ခံအားကောင်းစေမယ် ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ခံစားရမှာပါ။
ဒါ့အပြင် အူနံရံတွေကို အာဟာရ စုပ်ယူမှုကောင်းစေတာက ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို ပြည့်ဝစွာ ရရှိစေလို့ ကိုယ်ခံအားကောင်းပြီး ရောဂါဘယကင်းလို့ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။
lcFos ကို ဘယ်ကနေ ရနိုင်လဲ……….
ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ကစလို့ ကိုယ်ခံအား စနစ်အထိ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ lcFos ကို lcFos ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ ကလေးနို့မှုန့်တွေကရနိုင်တဲ့အပြင်
cereal တို့ကနေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အစာခြေစနစ်ကျန်းမာပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ခံအားနဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ ကလေးရဲ့ အာဟာရထဲမှာ lcFos လေး ပါဝင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးလိုက်စို့နော် မေမေတို့ရေ………….။
PREBIOTICS 101 https://www.happyfamilyorganics.com/learning-center/baby/prebiotics-101/ Accessed Date 12 May 2020
What Are Prebiotics? https://www.webmd.com/digestive-disorders/prebiotics-overview Accessed Date 12 May 2020